iPad - Wararka iPhone | Wararka IPhone
El iPad waa kaniiniga ama kiniin Waxaa soo saaray Apple, waa aaladda dhexe ee udhaxeysa Mac iyo iPhone. Waxay leedahay a 9,7-inji shaashad taabasho badan leh waxaana jira tusaalayaal laxiriira xogta ama moodellada kaliya leh WiFi, oo aad ugu foogan isticmaalka gudaha. Waxay la wadaagtaa iPhone-ka nidaam hawlgal, inkasta oo codsiyada ay ku habboon yihiin shaashadeeda weyn. Waxay leedahay dukaan codsi u gaar ah waxayna sidoo kale isticmaali kartaa dhammaan codsiyada ku jira iPhone-ka. Halkan waxaad ku arki kartaa qaar badan oo ka mid ah wararkeeda, laakiin haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan wararka soo gal bartayada walaasheed Wararka IPad.
Tani waa sharraxa sababta Qabanqaabiyaha Muuqaalka ee iPadOS 16 uu u taageero kaliya chip M1
by Angel Gonzalez samee Toddobaadyada 2 .
Apple waxay inta badan ku xaddidaa qaar ka mid ah ikhtiyaarrada nidaamyada cusub ee hawlgalka qalabka hore. Sharaxaadda tani waa laba arrimood….
iPads la jaan qaada iOS 16
by Kariim Hmeidan samee Toddobaadyada 3 .
Waxaan wali ku jirnaa gaajo-muhiimnimo ka dib. Apple ayaa shalay noo soo bandhigtay nidaamyada cusub ee ay ku shaqeeyaan dhammaan aaladaha ay ku shaqeyso, qaar ka mid ah nidaamyada cusub ee hawlgalka…
iPadOS 16 wuxuu yimid isagoo xambaarsan war la wada sugayey
by Alex vincent samee Toddobaadyada 3 .
Sannadkii 2021 kii ugu horreeyay ee iPad ah oo leh M1 chip ayaa la sii daayay. Tan iyo markii qalabkaas la soo bandhigay, dhammaanteen waxaan saadaalineynaa horumar…
Fikradani waxay tuseysaa sida uu u ekaan doono abka Cimilada ee iPadOS
by Angel Gonzalez samee Bilaha 2 .
iPadOS waxay u timid sidii nidaamkeeda ku shaqaynta iPadka dhawr sano ka hor. Si kastaba ha noqotee, ilaa waqtigaas iOS ayaa la qabsanayay…
Sida loo daawado iPad-ka telefishanka
by Qolka Ignatius samee Bilaha 2 .
Hubaal hal mar wax ka badan waxaad ka fikirtay sida iPadka looga daawado taleefishinka si aad ugu raaxaysato nuxurka...
Jiilka soo socda ee iPad Pro ayaa qaadi doona chip-ka M2 waxaana la sii dayn doonaa deyrta
by Angel Gonzalez samee Bilaha 3 .
Dhacdadii Apple ee bishii Maarso ee la soo dhaafay waxay dhinac uga tagtay iPad Pro. Caadiyan March had iyo jeer waxay lahayd…
Tijaabooyinku waxay xaqiijinayaan in iPad Air-ka cusub uu leeyahay waxqabad la mid ah kan iPad Pro
by Tony Cortes samee Bilaha 3 .
Qaar ka mid ah dadka la qalday ayaa rumaysnaa in processor-ka M1 ee ku rakibaya iPad Air-ka cusub uu noqon doono mid "kooban" si uu u bixiyo waxqabad hoose.
Waxaad ku xidhi kartaa iPad-ka USB-C ee Bandhigga Studio, laakiin kaliya moodooyinka qaarkood
by Tony Cortes samee Bilaha 4 .
Cubnimada weyn ee dhacdadii Apple shalay galabtii waxay ahayd shaki la'aan Mac Studio iyo…
iPad Air-ka cusub, waa bahal ku socda xawaaraha ugu badan
by louis padilla samee Bilaha 4 .
Apple waxay cusboonaysiisay iPad Air, waxayna fulisay wixii la filayay. Isku dhafka processor-ka ugu awooda badan…
iPad Air cusub ayaa lahaan doona processor-ka M1 ee iPad Pro
Wax ka yar 24 saacadood ayaanu ka fognahay dhacdada soo bandhigtay Apple taasna waxay la macno tahay in xanta…
Sida loo doorto iPad-ka ugu fiican kulliyadda
by Jordi Gimenez samee Bilaha 4 .
Tani waa mid ka mid ah go'aamada ay tahay inaan gaadhno marmarkaasoo ah mid aad u adag in laga jawaabo.
Sida loo kiciyo ama loo tirtiro xisaabtaada Facebook
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu sawiro qalinka Apple ee iPad Pro
Muxuu iPad-ku u lahayn kalkuleytar?
Immisa ayey ku kacaysaa hagaajinta shaashadda iPhone ama iPad ee Apple?
Sida loo hubiyo heerka batteriga ee qalinka Apple
Sida looga saaro akoonka iCloud Ipadka
Sida loo tirtiro Faylasha iyo Macluumaadka laga helo iCloud si loo Furo Booska
Sida loo qaado shaashadda shaashadda adiga oo aan lahayn badhanka Guriga iyo Awoodda
10 tabaha aad u baahan tahay si aad uga gudubto heerarka dhirta iyo Zombies 2
Casharro (Mac): Hagaaji "iTunes Library.itl lama aqrin karo ..." khalad